Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha ogaanshaha carrada - Shiinaha Warshad lagu ogaanayo halabuurka ciidda
FK-CT10 Sunta cilmiga nafaqada carrada
Qeyb dhameystiran oo muunad carbeed gacanta kuheysa FK-001
Qalabkan waxaa loo isticmaali karaa sambal baarista cilmiga dhulka iyo qaab dhismeedka dhulka. Rakibaadda guud iyo kala-goynta qalabka waa mid aad u fudud. Sanduuqa qalabka gaarka ah wuxuu ka dhigayaa mid ku habboon in la qaado oo laga fogaado waxyeelada muunad-yaha ciidda dibadda.
Baaskiil Rotary ah oo ku shaqeeya Sample Sample FK-QY02
Qalabkani waa muunad carro (shidaal) ciidda soo saarta oo ay soo saartay warshaddeena iyada oo ku saleysan fikradaha macaamiisheena, baahida isticmaaleyaasha kala duwan iyo cilmi baarista suuqa. Qalabka waxaa wata matoor shidaal. Waxay caan ku tahay yaraynta xoogga shaqaalaha ee sambal qaadista shaqaalaha si aad ah, iyadoo dhakhso badan oo sahal lagu soo qaadan karo.